नयाँलाई चम्कने अवसर - खेलकुद - साप्ताहिक
नयाँलाई चम्कने अवसर
एसीसी इमर्जिङ टिम्स कप प्रतियोगितालाई लिएर सुरुमा अनेक किसिमका अन्यौल थिए । जस्तो प्रतियोगिता हुन्छ कि हुँदैन ? भयो भने पनि त्यसमा नेपालले सहभागिताको अवसर पाउनेछ कि छैन ? यी दुवै प्रश्नको औचित्य अब समाप्त भैसकेको छ, किनभने प्रतियोगिता बंगलादेशमा जारी खेलमा नेपालको सहभागिता छ । सन् २०१३ मा पहिलोपल्ट एसीसी इमर्जिङ टिम्स कप सञ्चालनमा आएको थियो ।
प्रतियोगिताको उद्देश्य थियो, उदीयमान टिमलाई क्रिकेटका प्रमुख टिमसँग भिड्ने अवसर प्रदान गर्ने । त्यसयता एसियाली क्रिकेट काउन्सिल (एसीसी) को अस्तित्व नै लगभग समाप्तिको स्थितिमा पुगेको थियो । यो खेलको सर्वोच्च संस्था अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट काउन्सिल (आईसीसी) ले त्यति बेला एसीसीको अस्तित्वको आवश्यकता नै महसुस गरेको थिएन, त्यसैले यसलाई खारेजीको सँघारमा पुर्‍याइएको थियो, तर पछि आईसीसीले एसीसीलाई जीवन्त राख्ने निर्णय गर्‍यो ।
एसीसी अस्तित्वमा रहे पनि यसको खासै कुनै काम र भूमिका थिएन । एसीसी अझै जिवित छ भनेर देखाउन नै हुन लागेको हो— एसीसी इमर्जिङ टिम्स कप । यो प्रतियोगितामा नेपालको सहभागिता अन्तिम समयमा आएर टुंगो लागेको हो, लामो कौतूहलताबीच । प्रतियोगितामा कुल आठ टिमको सहभागिता छ र तिनलाई दुई समूहमा विभाजन गरिएको छ । प्रत्येक समूहमा रहेका चार–चार टिमबीच पहिले लिग चरणका खेल हुनेछन् ।
यो प्रतियोगितामा टेस्ट मान्यता प्राप्त भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका एवं बंगलादेशले यू–२३ टिम छन् भने नेपालसहित अफगानिस्तान, हङकङ तथा मलेसियाले आफ्नो राष्ट्रिय टिम सहभागी छन् । नेपालको समूह ‘बी’ मा पाकिस्तान, बंगलादेश तथा हङकङ छन् ।
नेपाली क्रिकेटमा लामो समयदेखि राष्ट्रिय टिमको ठीक मुनि अर्को ‘ए’ टिम बनाउने योजनाका सम्बन्धमा बहस भैरहेको छ । त्यस्तो टिम अस्तित्वमा रहे, पछि त्यसले राष्ट्रिय टिमलाई नै बलियो बनाउने विश्वास गरिएको थियो, तर उक्त रणनीति कहिल्यै कार्यान्वयनमा आएन । यद्यपि यसको सानो स्वरूपमै सही, प्रयास भने भएको छ । टिमका कप्तान ज्ञानेन्द्र मल्ल छन्।
क्याप्टेन मल्ल भन्छन्, ‘हामी केही नयाँ खेलाडीसहित प्रतियोगिता खेल्नेछौं र यसबाट उनीहरूले बहुमूल्य अनुभव बटुल्नेछन् । त्यसैका आधारमा केही नयाँ खेलाडीका लागि राष्ट्रिय टिमको अवसर पनि खुल्नेछ ।’ टिमका प्रशिक्षक जगत टमाटा उनी पनि टिमका युवा खेलाडीसामु राम्रो प्रदर्शनको चुनौती रहेको बताउँछन् । यो प्रतियोगितामा पारस खड्काका अतिरिक्त शक्ति गौचन, वसन्त रेग्मी तथा सोमपाल कामीलाई आराम दिइएको छ ।